प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाए सिनेमाको लभको कथा « Ok Janata Newsportal
प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाए सिनेमाको लभको कथा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकका विभिन्न परिवर्तनमा सञ्चार जगतले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित आफू निकट प्रेस संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अहिले पनि मुलुकमा संकट पैदा भएकाले सञ्चार जगतको भूमिका सकारात्मक हुनुपर्ने औल्याए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सिनेमाको प्रेम कथाजस्तै गरी केही मान्छे बर्बराएका छन्, सिनेमाको कथामा लभ पनि होइन, घाइते पनि होइन, मान्छे मरेको पनि छैन खाली एक पटकको मनोरञ्जन र दुःख हो । त्यसरी नै अहिले मुलुकमा एक पक्ष आकाशै खसेझैँ गरी भ्रम पैदा गर्न उद्दत छ त्यसको पछाडि नलाग्नुहोला ।’
एक फरक प्रसंगमा ओलीले कुन्ती मोक्तानको गीत सम्झिए, ‘आगो बर्बरायो, आगो बर्बरायो प्रदेशबाट आउँछन् की क्याहो आगो भर्भरायो ।’ कुनै समय यस्तो थियो, सूचना पाउनका लागि केही वस्तुको इशारा बुझ्नुपथ्र्यो । अहिले सञ्चार जगतले ठूलो फड्को मारेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्यको पक्षमा मिडिया उभिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सम्बोधनका क्रममा ओलीले मुलुकलाई भड्कालोमा हाल्न खोज्ने, अस्थीर बनाउन उद्दत बन्ने आफ्नै पार्टीका पूर्व सहपाठी रहेको बताउनुभयो । सरकारले गरेका हरेक काममा अब्जेक्सन जनाउने पार्टीभित्रै भएपछि कसरी मिल्नु ? कसरी एकतालाई सुदृढ पार्नु ? आफूले राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै ढाल्ने प्रयास भएपछि विभाजित हुनुपरेको ओलीको जिकीर थियो ।
ओलीले प्रचण्डलाई कटाक्ष गर्दै भने, ‘हामी निष्पक्ष ढंगले निर्वाचनमा जान्छौ, मतपत्र च्यात्दैनौ जिताउनुपर्ने छोरी छैनन्, ज्वाईलाई जागिर लगाउनु छैन, मात्रै देशको चिन्ता छ ।’ ओलीले थप्नुभयो, ‘गुडमा रहेका चरालाई माउले नियमित चारो खुवाउँछ, ठूलो बनाउँछ, हुर्काउँछ पखेटा लागेपछि भूर्र उड्यो भाग्यो ।’